Guddoomiye Mursal oo uga sii daray xaaladdii cakirneyd ee dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Guddoomiye Mursal oo uga sii daray xaaladdii cakirneyd ee dalka
Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Mursal ayaa uga sii daray xaaladdii dalka ee cakirneyd muddooyinkii u dambeeyay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Mursal ayaa wada qorshe halis galin kara jiritaanka dowladnimada iyo nabad gelyada yar ee maanta la haysto, isagoo fiirinaya rabitaanka Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayuu go'aansaday in uu abaabulo qorshe loogu sameynayo maamulka Farmaajo inkastoo maanta la fashiliyay.
Saddex qodob oo xasaasi ah ayuu ka dhawaajiyay guddoomiye Mursal waxa uuna si cad u sheegay oo aan gambasho lahayn:
Heshiiskii 17 September in uu fashilmay.
Muddo kordhin inuu u samaynayo Barlamaanka iyo Madaxweynaha!
Xildhibaan Mahad Salaad oo kamida xildhibaanada Golaha Shacabka BJFS sidoo kalena qeyb ka ahaa Xildhibaanadii hor istaagay qorshihii maanta fashilmay ee muddo kororsiga ayaa yiri "Waxaa xaqiiqo ah in maanta cid waliba u caddahay meesha loo socdo. Hurdada halaga kaco ayaan idin leeyahay Farmaajo waa balaayo inoo hagoogane!"
Guddoomiye Mursal ayaa dalbaday tiro ciidan oo dheeri ah si qorshaha muddo kororsiga looga guul gaaro fadhiyada soo socda, waxaana ka go'an sida aan xogta ku heleeno inuu fuliyo go'aankaas waqti ku darsashada ah!